Warbaahinta Bulshadu ma lagu ilaaliyaa Hadalka Xorta ah iyo Saxaafadda Xorta ah? | Martech Zone
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu cabsida badan ee lagu hanjabayo hadalka xorta ah iyo saxaafadda xorta ah ee dalkan. Golaha guurtida ayaa meel mariyay a sharciga gaashaanka warbaahinta taas oo qeexday suxufiga iyo halka heerka kaliya ee la ilaaliyo ee saxafiyiinta ay yihiin kuwa ku howlan waxqabadyada xawilaada wararka xalaasha ah.
Laga soo bilaabo aragtida cagta 10,000, biilku wuxuu u muuqdaa fikrad weyn. LA Times xitaa waxay ugu yeeraan "Hindise sharciyeedka ilaalinta suxufiyiinta". Dhibaatadu waa luqadda hoose ee u oggolaaneysa dowladda inay qeexdo waxa a wariye waa, yaa a wariye waa, ama waa maxay xog-ururin sharci ah waa.
Waa tan qaadashadayda. Suxufiga Muwaadiniinta ah wuxuu adeegsanayaa cadaadis aan laga gudbi karin oo ku socda dowladdeena taas oo daaha ka rogaysa arrimo badan. Dabcan waxaa jira taageero laba-dhinac ah oo dib loogu qeexayo loona soo koobayo baaxadda cidda ama waxa ay tahay suxufinimadu. Qof kasta oo ku hanjabaya inuu kashifo dhibaatooyinka dowladda wuxuu lumin karaa ilaalinta saxaafadda ee ku xusan Dastuurkeenna. Siyaasiyiinta oo dhami way jeclaan lahaayeen taas macnaheedu waa inay codsan karaan xoogagga dawladda si ay ugu hanjabaan oo u cabsi geliyaan kuwa ay diidan yihiin.
Haddii aad ku raacsan tahay Edward Snowden ama maya, macluumaadka uu sii daayay wuxuu ku wargaliyay dadweynaha wuxuuna sababay caro barnaamijyadii ay NSA na basaasayeen. Sharcigani saameyn kuma yeelanayo sharci ahaanshaha wixii uu sameeyay Snowden. Si cabsi leh, waxay saameyn ku yeelan kartaa in saxafiga sii daayay uu ahaa mid sharci ah iyo in kale, inkasta oo uu ahaan lahaa muwaadin Mareykan ah. Ayaa sii deynaysay qalab qarsoodi ah xog-ururin sharci ah?
Intii u dhaxeysay 1972 iyo 1976, Bob Woodward iyo Carl Bernstein waxay u soo baxeen laba wariye oo ka mid ah kuwa ugu caansan Mareykanka waxaana waligood loo aqoonsaday inay yihiin weriyeyaashii jabiyay Watergate, sheekada ugu weyn ee siyaasadda Mareykanka. Inta badan macluumaadka ay bixiyeen waxaa lagu dhammeeyay iyada oo loo marayo xog-wadeen ka tirsan Aqalka Cad. Taasi miyay ahayd xog-ururin sharci ah?
Waxaa laga yaabaa in Jamhuuriyeyaasha awoodda haya ay sheegi karaan in MSNBC uusan sharci ahayn. Waxaa laga yaabaa in Dimuqraadiyiinta awoodda ku leh ay sheegi karaan Fox News inaysan sharci ahayn. Ka waran haddii hal wariye uu soo bandhigo fadeexad weyn oo dawladeed iyada oo loo marayo in ka yar sharci-ururinta wararka? Asaga / ayada malagu tuuri karaa jeelka mase lagu aasi karaa fadeexada? Kuwani waa uun dhibaatooyinka ka dhex jira warbaahinta caadiga ah. Way ka sii xumaaneysaa markaad ka fikirto internetka iyo haddii qoraal maqaal ah oo ku saabsan Wiki-ga la ilaaliyo (waxaa laga yaabaa inaan lagu kala saarin blogger ama wariye).
Ka warran markaad bilowdo bogga Facebook inaad ka soo horjeedo ama taageerto mowduuc. Waxaad ku qaadataa waqti badan inaad kuqarxiso macluumaadka internetka, aad kula wadaagto boggaaga Facebook, kobcinta dhagaystayaasha iyo dhisida bulshada. Suxufiyad ma tahay Boggaaga Facebook ma ilaaliyaa? Ma soo aruurisay macluumaadka aad wadaagtay si xalaal ah? Mise you ma ku dacwayn kartaa mucaaradka, bulshada ayaa xiri doonta, oo xitaa lagugu xiri karaa maxaa yeelay kuma ilaalineysid hoosta Dowladda qeexid.
Iyada oo leh baraha bulshada iyo shabakadda dhijitaalka ah, ku dhowaad qof kasta oo ka qayb qaadanaya ayaa ururinaya oo la wadaagaya wararka. Waa inaan dhamaanteen ilaalino.
Dib u laabo markii dastuurka la qorayay, qofkasta oo celcelis ahaan wadada mara oo amaahsan kara ama awoodi kara madbacad ayaa ahaa wariye. Haddii aad dib u noqotid oo aad dib u eegis ku sameyso qaar ka mid ah waraaqaha bogga ee daabacan markaa, waxay ahaayeen kuwo arxan daran. Siyaasiyiinta waxaa lagu dhajiyay been abuur buuxa si loogu been sheego shacabka si loogu aaso hamigooda siyaasadeed. Ahaanshaha suxufiyad uma baahna shahaado… xitaa uma baahnid inaad higgaadiso ama aad isticmaasho naxwaha saxda ah! Iyo hay'adaha wararka ma aysan soo muuqan ilaa tobanaan sano kadib markii wargeysyada ay bilaabeen inay iibsadaan wareegyada yar yar. Tani waxay horseeday maalqabeenada warbaahinta wararka ee aan maanta haysanno.
Saxafiyiintii uguhoreeyay waxay ahaayeen muwaadiniin kaliya oo hadalka hela. Waxaa jiray eber sharciyeynta cidda ay bartilmaameedsadeen, sida ay ku heleen macluumaadka, ama halka ay ku daabaceen. Haddana - madaxdeenna dalkeenna… kuwaas oo badiyaa bartilmaameed u ahaa weeraradan - waxay doorteen inay ilaaliyaan xuquuqda hadalka iyo saxaafadda xorta ah. Waxay doorteen, si ula kac ah, in aan la qeexin waxa ay ahayd saxaafaddu, sida wararka loo soo ururiyay, ama cidda iska leh.
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay Matt Drudge on this, yaa Warbixinta Drudge laga yaabee inaan lagu ilaalinaynin biilkan. Kani waa biil cabsi leh oo xadka u leh faashiisnimada, haddii uusan albaabka u fureyn.
Tags: hadal xor ahSaxaafaddaxog-ururin sharci ahSenate
Waxyaabaha aan caadiga ahayn: Codka Madasha Macaamiisha
Sep 13, 2013 at 11: 23 AM
Doug - kor uun buu u taaganyahay, dhibaato ayaa iga haysatay isticmaalka kordhinta keydkeyga (ma helin URL) mana isticmaali karin Google+ qadkaaga saamiga maxaa yeelay wuxuu ahaa "hoos" bogga aniguna ma aanan rogi karin . Ololku waa mid xiiso badan.
Sep 14, 2013 at 11: 18 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida .. runtii waxaan uhelay aqris wanaagsan ..